ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဂျော့ - ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အ Apply 🥇
ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဂျော့ဘ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလွတ်လပ်မှုကိုတစ်ဦးဥစ္စာဓနရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီပေးနေ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းဈေးကွက်အတွင်းဘဏ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုပေါ်တွင်သင်ပဲ့ပြင်ချင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျယခုကြှနျုပျတို့ပင်ကူညီပေးနေများမှာ ဘလွန်းဘာ့ဂ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအကျိုးဆက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကာတာကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ။ ထို့ကြောင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်တစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပူးပေါင်းနှင့်စတင်။
ထိပ်ဆုံး rated ကုမ္ပဏီအတော်များများကအဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာအသစ်တစ်ခုန်ထမ်းကိုရှာဖွေဖို့ဉီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်အောင်မြင်ရန်အားလုံးထွက်သွားပါ။ ထိုကိစ္စတွင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစုဆောင်းမှုကဏ္ဍများဘဏ်လုပ်ငန်းမှာ ယူအေအီးရှိလူများရှာကြံအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ.
ထောက်ပြဖို့ အားလုံးအာရဗီတစ်ကမ္ဘာလုံးအမျိုးသားရေးသဘောထားကို သောကဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဖန်တီး အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဘယ်နေရာသို့ပို့သင့်သည်၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဘဏ်အလုပ်များ။ ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွက်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားအများစုမှာ၎င်းတို့သည်ကြီးထွားလာသောအခြေအနေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဘဏ်ကဏ္sectorမှအသိပညာဗဟုသုတနှင့်စီးပွားရေးဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုသတိပြုပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်အပြုအမူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘတိုးတက်မှုနှုန်း.
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယခုအဓိကအားဖြင့်အငယ်တန်းကနေအကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီအထက် အာရှကနေဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ နိုင်ငံတကာကနှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးနေရာပြောင်းရွှေ့လူမျိုး၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေအစီအစဉ်များ 2016 ကတည်းကအလွန်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်လာသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ငါတို့သည်ငါတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကူအညီနဲ့ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းဘဏ်၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏န့၌သင်တို့ကိုကူညီသောမျှော်လင့်ချက်အတွက်ရှိသည်။ မပါဘဲပင်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းကြောင့်ကြောက်လန့် ကျွန်တော်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်ကြသည်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီရွေးချယ်မှု၏အလုပ်ရှင်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ယုံကြည်သည်။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျိန်းသေသင်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များနှင့်စံအလုပ်အကိုင်အကြားရှိတံတားကွာဟမှုကိုက်ညီကူညီပေးနေ။ အမှန်တကယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ကူညီပေးပါမည် သင်နှင့်သင်ဥပမာဒူဘိုင်းဘို့ဖြစ်ချင်ဘယ်မှာဘယ်မှာ။
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းမှဆော်ဒီအာရေဗျကနေကျွမ်းကျင်သူများ, ကူဝိတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တလွှားသွားလာ။ ကျနော်တို့အခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များသို့သွားလေ၏ဟောင်းကြိမ်နှင့်လူများအနေဖြင့်မတူကြပါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းလူငယ်ဘဏ္ဍာရေးကျောင်းမှထွက်ခွာသွားသည့်အခါကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းအငယ်တန်းအဆင့်အထိအလုပ်ရ အခွင့်အလမ်း, ပြီးတော့ lif ဘို့မိမိတို့အလုပ်စတင်အီး။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအချို့သုတေသနပြုတော်မူပြီ။
ထိုအဘို့ကိုပထမဦးဆုံးအနေအထား လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးများကို ဒါဟာနီးပါးအမြဲဘဏ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျွမ်းကျင်သူများရာထူးတိုးခံရ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကတစ်နှစ်အနည်းငယ်ယူမည်ဘဏျခှဲ၌လက်ထောက်မန်နေဂျာတိုး, စကားပြော။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, မန်နေဂျာရာထူးကိုမှရာထူးတိုးတဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့၌ 3-5 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်အချိန်ယူ.
ယခုအချိန်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အိန္ဒိယအဘို့အပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ ကျွမ်းကျင်သူများ။ အထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ နောက်နှစ်များတွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမေးမြန်းလေ့ရှိသည် ဒူဘိုင်းမှာဘဏ်လုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ။ သို့သော်အဖြေကိုစီမံရန်ဘယ်တော့မျှမလွယ်ကူပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့မှ visitors ည့်သည်အသစ်များအများစု။ ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကငွေအမြောက်အမြားရှာရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာ၏အဖြစ်မှန်တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူများမှာ ပြောတာကအလွန်အသေးစိတ်ကျပြီးအခွင့်အလမ်းကိုစီမံရန်ခက်ခဲသည်။ ပင်စမတ်လူတစ် ဦး သည်။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းလန်းစပြုပြီသောအခါ။ အသစ်အလုပ်အကိုင်များရသောအခါဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းကဲ့သို့ရွှေ့။ ဒူဘိုင်းမှပြောင်းရွှေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ ကနေအထူးသဖြင့်စီမံကိန်းအသစ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ဘို့တောင်အာဖရိက အသက်ရှင်စေခြင်းငှါလာကြ၏။ ထိုအခါအသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကွာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကနေစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် 2009 အတွက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအပြီး။ အသစ်သောလူငယ်များနောက်ခံကောင်းသောကျောင်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နေအိမ်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည့်အခါ။ နယူးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယကအမြဲသူတို့တစ်တွေအလုပ်ရှာတွေ့ပါကအသက်အဘို့ဖြစ်ရမည်ယုံကြည်သည်။ ပြီးသားယူအေအီးနေထိုင်ကြသူလူများဥပမာအချို့။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများ w အလုပ်အကိုင်ရဖို့ဘယ်လိုသိ။ သငျသညျလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအခန်းကဏ္ဍအစဉ်အမြဲဘဏ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သို့မဟုတ်ရောင်းအားအလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျအတော်လေးမြန်ဆန်စွာငှားရမ်းထားနိုင်ပါသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်ကဘဏ်ထဲမှာအိမ်တအိမ်အတွင်း၌လက်ထောက်မန်နေဂျာမှတိုးတက်ကျိန်းသေဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပင်သင်ကအကြီးတန်းမန်နေဂျာရာထူးကိုအဘို့သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးနိုင် ဘဏ်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရာထူးအဘို့သင့်အခွင့်အလမ်းကြိုးစားကြ.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒူဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ကြောင့်အများအပြားဖြစ်ပါသည် ပြည်ပမှာယူအေအီးအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေကို နောက်ကွယ်မှာ။ က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, ဘဏ္ဍာရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်များ မြင်ကွင်းများကြောင့်လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်ထက်မပိုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သငျသညျမရေမတွက်နိုင်သောနာရီအလုပ်လုပ်မည်အများဆုံးကိစ္စများတွင်လူထုစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အဆက်ကိုသင်စိတ်ထဲ၌ဤအတူ။ အတွက်ချပြီးနေသောအလုပ်ကြိုးစားမှုကိုမမွငျ, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဓိကအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်တိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနျဌာနခှဲနှင့်ဖောက်သည်-facing အခန်းကဏ္ဍတွင်။
တနည်းအားဖြင့်သင်သေချာဘို့အကြောင်းအစအဦးမှာငွေရှင်းကောင်တာတွင်အဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်သင်အများကြီးပိုပြီးတော့ကံကောင်းပါလိမ့်မည်, သင်ဖောက်သည်န်ဆောင်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ပါ။ က hard အလုပ်၏အနှစ် 10 အထိကြာလိမ့်မယ်အကောင့်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုအကြံပေးသို့မဟုတ်ပင်အသင်းမန်နေဂျာဖြစ်လာမှသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ် အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေမြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မည်သို့။ သင်အလားအလာ CEO ဖြစ်သူရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုရောင်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်လုံလောက်သောအရည်အချင်းများဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ။
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းထားခံရဖို့ကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းများစွာ။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်တိုးဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သင်တို့မူကားတိုးတက်မှုပြုကြလိမ့်မည်မဟုတ်တိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအဘို့ဥပမာ, Deutsche ဘဏ်ရဲ့နေရာစီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့မည့်အစီအစဉ်။ ဒါပေမဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တကမ္ဘာလုံးထက်ပို 250 အလုပ်အကိုင်များဖြတ်တောက်စတင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင်လိုအပ် သငျသညျအောင်မြင်မှုရဲ့သင်၏အသက်တာလမ်းကြောင်းကိုရှေးခယျြခဲ့ပုံကိုအကြောင်းကိုအလွန်သတိထားပါရန်.
အထူးသဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရာထူးတစ်ခုပုံဥပမာအဖြစ် အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောအသစ်ကဘဏ္ဍာရေး၏ချဉ်းကပ်ဖို့လိုအပ်ကောင်းတစ်ဦးအနေအထားမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်, ကြောင့်အခြားသောလမ်းထားရန် ဒူဘိုင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေစုဆောင်း။ သင်တို့အဘို့မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဘဏ္ဍာရေးအလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာရာထူး၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာကြောင်းဒူဘိုင်းစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်သတင်းအတွက်ထင်ရှားစေခြင်းငှါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဖြစ်။ အထူးသဖြင့်အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေကြသူဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်။
အဆိုပါဆက်သွယ်မှု သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေအတွက်အောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, စော်ဘွားအတွက်ရရှိနိုင်ရာထူးချေးငွေအကြံပေးကြသည်။ ထို့အပြင်ခရက်ဒစ်ကဒ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်, ဒူဘိုင်းတွင်ပိုမိုမကြာခဏရရှိနိုင်ဖြစ်လာငယ်တန်းရောင်းအားအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဖြစ်အာမခံ-related အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်များစွာကိုဌာနများ, ယခုဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းထားပါတယ် အထူးသဖြင့် 2018 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်.
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ကြိမ်မှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတဆင့်ပို့ခြင်းအဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအရှိန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ Directory ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခှနျ-အခမဲ့ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူအခြားနေရာများတွင်ကမ္ဘာပေါ်မှာမရစေနိုင်ပါဘူး။ နှင့် $ 100k လုပ်ခလစာနှင့်ဆုကြေးငွေန်းကျင်ရေရှည်၌ယူအေအီးထက်အခြားတော်တော်များများအဆုံးမဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ Apply ဖောက်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်း, ထိုမှတပါးစီးပွားဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အနေအထားပါ။ အတူတူလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်, ဒူဘိုင်းအတွက်ထို့ပြင်စျေးကွက်နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအလုပ်အကိုင်များအတူ။ ထို့အပြင် ဒူဘိုင်းတွင်စာရင်းကိုင်အလုပ်အကိုင်များအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်, အိုင်တီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယခုအားလုံးယူအေအီးအတွက်အလုပ်များဘဏ်များ၏ပြေးဘို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကှကျကစား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မဘဏ်များအားလုံးမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာန်ထမ်း ကိုယ့်စံဖောက်သည်-facing အခန်းကဏ္ဍရှိသည်။
သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ထမ်းများအတော်လေးခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်တစ်ပတ်ကို 48 နာရီဝန်းကျင်အချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာသောကြောင့်ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်တစ်စိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်သည်နှင့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းငွေကြေးထောက်ပံ့အနေအထားဘဏ္ဍာရေးလောကီသားတို့သည်အထဲတွင်အများဆုံးအလေးပေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ၏အထူသည်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းသည်။ ကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့အဖြစ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာချွတ်ရိုးရာရက်ပေါင်းဖြစ်လာမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချိန်ကဒီတကမ္ဘာလုံးကုန်သွယ်နာရီလျှော့ချခံရခြင်းရှိသည်ဟုအခက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိဘဏ်မန်နေဂျာဖွင့်သုံးရက်တစ်ပါတ်နဲ့တခြားဘဏ်များကပြောင်းလဲပစ်စံနမူနာနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီ။
အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတော်လေးယှဉ်ပြိုင်သည်။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူဤမျှလောက်များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သစ်တစ်ခု အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ပါကစ္စတန်အလုပ်သမား။ အမြဲတမ်းနဲ့အခြားအင်ဒီးယန်းများနှင့်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်။ အဖြစ်မှန်အတွက်အခါသင်ယူအေအီးအတွက်သင့်လျော်သောအလုပ်ရှင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ။ ဒါဟာထီအနိုင်ရကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သင်ပင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ထက်ပိုပိုက်ဆံစေမည်။
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဂျော့ Get လုပ်နည်း
ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ်န်ထမ်းအများစုသည်။ သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ရက်ပေါင်းချွတ်အဖြစ်ကုသရပါမည်။ သူဘဏ်များဒါပေမယ့်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာအများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်း နေဆဲ 50 ကြာသပတေးနေ့၏% ချွတ်အပေါင်းတို့နှင့်နေ့ရက်ကိုသောကြာနေ့ချွတ်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိတစ်နေ့လျှင်ရှစ်နာရီကြာနေဆဲရှိပါတယ်။ နာရီနာရီဝန်းကျင်ရှိပါတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများအတွက်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်ပေမယ့်သင်လက်ရှိဘဏ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောအနေအထားအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးရုတ်တရက်အားလုံးအားလုံး။ သို့သော်ဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ကောင်းစွာ-paid အမှုဆောင်အရာရှိအပေါ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခု 24 /7အလုပ်လုပ်အချိန်လိုအပ်မည်, ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစေ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးတစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမန်နေဂျာတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ်သင်စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါတယ်သောအတိအကျအချိန်အချိန်စာရင်းနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်အမြဲလုပ်နိုင် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးပါ။ ဒီနည်းလမ်းကအထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
များအတွက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသော ဒူဘိုင်းတွင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များ အကယ်. သင်ဥပမာ, ညာဘက်အသိပေးစာပေးခြင်းမရှိဘဲသင်၏အလုပ်စွန့်ခွာသော။ သို့မဟုတ်ပင်သင်ကဘဏ်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌သင်တို့၏အလုပ်ကနေပစ်ခတ်ရလိမ့်မယ်။ လျှင်ပင်သင်၏ဖိုင်များကိုအပေါ်သေချာအမှတ်အသားဘို့ရှိပါတယ် သင်တစ်ဦးဟိုတယ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစား။ တဖန်သင်တို့ပင်ကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးမှာထပ်ဖွင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအလားတူအခန်းကဏ္ဍအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, သင်တို့အဘို့သင်၏ပုံမှန်အလုပ်စာချုပ်တစ်ခုကိုသတိထားမိဖြစ်သင့် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ သငျသညျ 12 လအထိသည်အနည်းဆုံး 24 တစ်ခုဆက်စပ်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းမှာအလုပ်မလုပ်နိုင်သောပြည်နယ်။
သငျသညျပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်. သိသင့်အရေးအပါဆုံးအရာတစျခု။ တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်နှင့်မည်ကဲ့သို့ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ယူအေအီးအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်။ သင်သိပါသေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွင်း၌စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို။ အဆိုပါဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာသင်အမြဲဒူဘိုင်းအတွက်ညာဘက် status ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပျကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘဏ်ထဲကနေခရက်ဒစ်ယူပြီး start တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်။ သင်လုံးဝသင့်ရဲ့အကြွေးတွေကိုချွတ်ပေးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းလုံးဝသေချာဖို့တော့လိုတယ်။
အဆိုပါဘဏ်စနစ်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ အဘို့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဥပမာ။ သင်အမြဲလက်ျာနံပါတျအတှငျးရှိဘဏ်အကောင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ unplanned overdrafts ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ ရိုးရှင်းစွာအသငျသညျအပြည့်အဝ၌ပေးဆောင်ကြဘူးလျှင်သင်ထောင်ထဲကိုသွားစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်။
System ကိုဘဏ်လုပ်ငန်းအထူးသဖြင့်ရေရှည်အသုံးပြုသူများအတွက်, ကာတာနှင့်ကူဝိတ်အတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာနှင့်အတူ, သင်ကအပေါင်ခံဘို့ကောင်းသောအကြွေးရလဒ်ကိုရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းယောဘ. သင် ... သင့်တယ် gယနေ့သင့်ရဲ့အိပ်မက်အခွင့်အလမ်း RAB ။ နှင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်တကား!
ကျနော်တို့တစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်းပေးကြသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသည်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်မှ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဒူဘိုင်းစီးတီးနှင့်အတူဘဏ်များကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသိရ အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်နေရာလွတ်။ ကုမ္ပဏီအများအပြားနှင့်မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကြံပေးများနှင့်သင်ရနိုင်သည် ယူအေအီးဘဏ်များအတွင်း။ သင်တစ်ဦးဘဏ်ထဲမှာအလုပ်အဘို့သင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းအလုံအလောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရမဖြစ်နိုင်ချေအမြဲရှိပါသည်။ သငျသညျအထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခက်ခဲအလုံအလောက်ရှာကြသည်လျှင်မူကားသင်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းသင်၏အထဲမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးနေရာ သငျသညျအလုပျအတှကျလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်.
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီထံမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းရန်။ သငျသညျယခုဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ထဲမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုစတင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအသစ်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဆီသို့ဦးတည်ပင်တဦးတည်းကိုပိုမိုခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေပါပြီ။ ငါတို့သည်ဖန်တီး သငျသညျအလုပျရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာအများအပြားအလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများ။ သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံများအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ။ နှင့်ကုမ္ပဏီများ get နှင့်အဘို့အပါဝင်ဖို့ထိုက်တန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ကြ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံ၏ရည်ရွယ်ချက်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အကိုက်ညီသောအရာကိုကြည့်ရှိသည်။ နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိသစ်တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Apply ။
စော်ဘွား NBD အတွက်ဂျော့ဘ်
ဒါကကုမ္ပဏီ ၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ စော်ဘွား NBD လည်း HR နှင့်ရုံးချုပ်နေရာလွတ်ပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနိမ့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အများကြီးအတူတူလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့် အသစ်ကအမှုဆောင်အရာရှိရုံဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား။ ယူအေအီး၌ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်သာ။
အဆိုပါစော်ဘွား NBD ပထမဦးစွာပယ်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်ချစ်တော်မူ၏။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကပင်ပေးပို့ခြင်းစော်ဘွား NBD ၏ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာဘို့သင့်ကိုစာတစ်စောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နားထောငျခအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုချစ်ခြင်းမေတ္တာ အားလုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အကွံဉာဏျ၏-bits။ ထို့အပြင်စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အကြံအစည်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အတူအခြားသူများကိုကူညီခြင်း။ ဤသည်မြဲမြံစွာအစဉ်အမြဲအသီးအသီးအခြားအများ၏လေးစားမှုဖြစ်မေးတယ်။ အသစ်ဝန်ထမ်း အမြဲတမ်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွင်းအားလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, အသုံးအနှုန်းများနှင့်မူဝါဒများနှင့်အတူလိုက်နာ။ ဒီကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အကောင်းဆုံးသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
စော်ဘွားဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို၏ကျယ်ပြန့အတူပေးပါသည်။ ပြည်ပရှိ NBD မှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ခြင်း နှင့်အလုပ်ဧည့်သည်ရှာနေအသစ်ကယူအေအီးများအတွက်အများဆုံးအကြံပြုကုမ္ပဏီဖြစ်လာကြပါပြီ။ စော်ဘွား NBD တစ်ခုပြည်ပရှိလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်အလုပ်ချိန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့.
ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အထဲကတချို့ဟာများအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းများပါဝင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီများ။ ထိုမှတပါး, သငျသညျလညျးဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်မန်နေဂျာအဖြစ်ရာထူးများအတွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘို့အကောင်းတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူလိုအပ်ပါတယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစမှရကျိုးနပ်သည် ဒီယူအေအီးကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူအများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာလျှောက်ထား.
ကျွန်တော်မှအကြံပြုကြသည်နောက်ထပ်ဘဏ် မှုအတွက်အလုပ် HSBC ကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်တကမ္ဘာလုံးအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်သည်။ အဆိုပါ HSBC က အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်းသူအကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာဘဏ်ဖြစ်လာသည်။ နှင့်လည်းယခုအကြီးအောင်မြင်မှုနှင့်အတူမြောက်အာဖရိကမှပြောင်းရွှေ့။ ဒူဘိုင်းမြို့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, HSBC ကအတွက်အများအပြားကိုင်းအခက်နှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးနှင့်အတော်လေးစမတ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဤဘဏ်နှင့်အတူအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဧရိယာမန်နေဂျာဖြစ်လာရည်ရွယ်ထားနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။
ဤဘဏ်အထိအငယ်တန်းအနေအထားအဆင့်ဟာအလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းပေး ရုံးချုပ်ကို C-အမှုဆောင်အရာရှိ ဘဏ္ဍာရေးဖောက်သည်န်ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးနှင့်အတူ။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုရှာဖွေခြင်း 300 နိုင်ငံများတွင်န်းကျင် 14 ရုံးများ၏ကွန်ယက်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်း.
အဆိုပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း 3,000 ကလူထက်ပိုပြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, HSBC ကဒူဘိုင်းအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဌာနချုပ်မှာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်, သငျသညျအရည်အချင်းများ၏မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံကောင်းရှိခြင်းလျှင်။ ကျိန်းသေ, ယနေ့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စာအုပ်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစား အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တဦးနဲ့အင်တာဗျူး.
ယူအေအီးအတွက် Standard Chartered ဘဏ်
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်လုပ်တစ်ဦးကနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် Standard Chartered ဘဏ်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ထိပ်တန်းဘဏ်များအဖြစ် rated ထို့အပြင် Forbes မဂ္ဂဇင်းမှမြင့်မား ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်တန်းဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာဘဏ်များအကြား။ အဆိုပါ Standard Chartered ဘဏ်လူတွေကိုကူညီခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းရန်ကြိုးပမ်း။ ဤဘဏ်မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေးခြင်းဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် အာရှတလွှားသစ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလားအလာကူညီရန်, အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။
အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အဖို့မရှာ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူပျော်မွေ့သည်။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များယူအေအီးအတွက် SCB နှင့်အတူအတော်လေးလက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထက်ပိုရှိပါတယ် 86,000 စျေးကွက်များတွင် 62 န်ထမ်း။ ပေးခြင်း ပင်လယ်ကွေ့ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှန်းကျင်မြင့်မားငှားရမ်းအနေအထား။ ဤဘဏ်ဘဏ္ဍာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြံထက်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပသမိုင်းတစ် 150-နှစ်အတွင်းရှိပါတယ်။ စံကမ္ဘာ့အများဆုံးပြောင်းလဲနေသောဒေသတချို့၌မိမိတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာဘဏ်စင်းလုံးငှား။ ဥပမာအားများအတွက်ကာတာနိုင်ငံ, ကူဝိတ်နဲ့ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းကူညီပေးသည် အလုပ်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီများသည် အထဲကပင်လယ်ကွေ့၌ဤစက်မှုလုပ်ငန်းမြင့်တက်။
ဤဘဏ်တစ်ဦးတည်းအချိန်သေနတ်သမားမဟုတ်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီမြင့်မားသောမြို့တော်နှင့်တကွ, လန်ဒန်စတော့အိတ်စျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဟောင်ကောင် Stock Exchange များကသူတို့ကိုအနည်းငယ်ဘဏ္ဍာရေးဆုပေးပါ။ အပြုသဘောဘက်တွင် သငျသညျတခုအာရှပြည်ပရှိလျှင် အဘယ်သူသည်တကမ္ဘာလုံးလုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ သင်ဤကုမ္ပဏီအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသုတေသန။ သူတို့မသာဖြစ်သောကြောင့် ယူအေအီးမှာအလုပ်လုပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေးအဖြစ်ဘုံဘေနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသား Stock Exchange များကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ။
အစိုးရဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကြပါစို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့စတင် of အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဗဟိုဘဏ်။ သင် Gov အလုပ်အကိုင်အလုပ်ခွင်နှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့တန်းတူညီမျှမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်ဖြစ်လျှင်သင်တို့အဘို့ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အစိုးရနှင့်အဘူဒါဘီတစ်ဦးတံတားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 2018 ၌ဆုံးမဩဝါဒ ကြောင်းအားလုံးပါဝင်နိုင်ယဉ်ကျေးမှု Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ဗဟိုဘဏ်နှင့်အတူ, သငျသညျ may ဒေတာစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ရာထူးရှာတွေ့ အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့လိမ်လည်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစစ်ဆေးရေးအဖြစ်။ ဗဟိုဘဏ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာအတော်ကြာအတွင်း။ သင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်အပြေးနေသောပညာတတ်အမှုဆောင်အရာရှိရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်အစီရင်ခံစာလှုပ်ရှားမှုများထုတ်လုပ်နေသည်။ ထိုအခါကြောင်းပေး တိုက်ရိုက်ယူအေအီးအစိုးရအမှုဆောင်အရာရှိမှ။ ဒါကကုမ္ပဏီလည်းစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်။
ဗဟိုဘဏ်ဘဏ္ဍာရေးရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်များအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။ လက်ျာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒါ့အပြင်အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအလွန်အမင်းခွဲခြားသာဖြစ်ပါတယ်လူတွေ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်။ အခါသင် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်။ သင့်ရဲ့တာဝန်သေချာယူအေအီး၏အမျိုးသားရေးစီးပွားရေးကြီးထွားအောင်အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်မျှမျှတတထုံးစံ၌သင်၏အလုပ်ကိုယ်စားလှယ်များကြောင်းသေချာပါစေ။
အဘူဒါဘီအတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်တစ်ခုမှာ။ Mashreq နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်အွန်လိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးတန်းအဆင့်အထိရာထူးမှဤမျှလောက်များစွာသောလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုဦးဆောင်လမ်းပြရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့ဖြစ်ကြသည် ယခုပွင့်လင်းကို C-Level အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခြင်း။ အသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဥစ္စာဓနရှိခြင်း Mashreq ဘဏ်ငှားရမ်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းနိုင်ငံတကာပညာရှင်များငှားရမ်း။ ဥပမာ Philipines ထံမှ နှင့်တောင်အာဖရိက။
ဒါကကုမ္ပဏီနီးပါးအသစ်ကတရာနေရာလွတ်ရှိခြင်း။ သူတို့ကအားလုံးပွင့်လင်းကြသည် အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲမှာ။ , ကုမ္ပဏီအာရုံအားလုံးကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှအသစ်သောပြည်တော်ပြန်ဆွဲဆောင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယတို့ပါဝင်သည် အလုပ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်အသစ်များကိုကျွမ်းကျင်မှုတစည်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးအတွေ့အကြုံကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲမှာရှာကြသည်လျှင်။ Mashreq ဘဏ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြစ်ပါသည်, သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာန။ သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းသူတို့နှင့်အတူဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များမကြိုးစားပါနှင့်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်သစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ကြီးသောရာအရပျ။ သင်တန်း၏, သငျသညျအများအပြားရာထူးမှာအလုပ်အကိုင်များကိုစတင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ ADIB ဖြစ်ပါတယ်။ ADIB ဘဏ် ရုံစံဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၏စီမံခန့်ခွဲမှု ထိုကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်းမှကျူးလွန်နေသည်။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဌာနခွဲအတွင်းအပြင်နေရာလွတ်နှင့်အိုင်တီဌာနဖန်တီးပေးပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိနေကြတနည်းအားဖြင့်ဆိုပါက google အလုပ် အိုင်တီမန်နေဂျာအဖြစ်သင်သည်အိပ်မက်ရှိနိုင်ပါသည် ADIB နှင့်အတူအခွင့်အလမ်း.
သငျသညျဘွဲ့ရနှင့်ကျောင်းသားအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်သည်မိမိဘဏ်နှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဤဘဏ်စာရေးရှိပါတယ် ယူအေအီးအသစ်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အစီအစဉ်များ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျတခုအတွေ့အကြုံရှိကြေးစားလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေရာလွတ်ရှာနေလျှင်။ သင်တို့သည်လည်းအများအပြားအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤဘဏ်များ၏ဘဏ်ခွဲပင်လယ်ကွေ့တွင်အများအပြားနိုင်ငံများရှိတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ရှိနေခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ADIB ဘဏ်ကူညီပေးနေ ဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်နှင့်လက်ရှိကုမ္ပဏီများမှ။ အသစ်သောစီမံကိန်းများနှင့်မန်နေဂျင်းငွေကြေးဤအဖွဲ့အစည်းအတွက်မန်နေဂျာ clients များဥစ္စာဓနရှိခဲ့သညျ။
သင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်ပရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ရှာနေ။ သို့မဟုတ်သင်ရုံယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုစိတ်ဝင်စားဖို့စိန်ခေါ်မှုဖမ်းပြီးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ တောင်မှသင်ကဒူဘိုင်းတစ်ဘွဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်သို့သော်သင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြသည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ADIB ဘဏ်နဲ့စတင်။ ဤသည်ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းသင်တို့အဘို့အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြှင့်တင်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ဒူဘိုင်းအသစ်အခွင့်အလမ်းများကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ဆိုးကျိုးခြမ်းတွင်ရွေးချယ်စရာအများစုကဒီကြီးထွားလာအဖှဲ့အစညျးနှငျ့လျှင်မြန်စွာလာကြ၏။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ထဲမှာ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြံပြုကြဘူး ဒေသခံအလုပ်သမားစွန့်စားမှုစတင်ရန် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ်တစ်ခုမှာ။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာကြံ။ သင်ကအစ္စလာမ့်ဘဏ်ယခုယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းကြောင်းသိကြရပေမည်။ ယူအေအီးအတွက်ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်ဖို့စိတ်ဝင်စားလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ သင်ကဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်, စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကပူးပေါင်းရပါမည်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအစ္စလာမ့်ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအချက်များအရသူတို့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ပေါ်တယ်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကျိန်းသေ, ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်မှအဖုံးအက္ခရာနှင့်သင်၏ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင် drop ။
အပြုသဘောရှုထောင့်တစ်ခုမှာဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ် 1975 တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ foreground အတွက်, သငျသညျရေရှည်အလုပ်အကိုင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမြျှောလငျ့နိုငျ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုနှင့်ရည်မှန်းချက်အတှေးအချေါမြားနှငျ့နယူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်မဟုတ်ဘဲတိုင်းလူတစ်ဦးတွင်။ အထူးသဖြင့်အဘယ်သူမျှမကမွတ်စလင်အစ္စလာမ်မစ်ရှာရီယာ၏အခြေခံမူနှုန်းအဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဘဏ်ကိုအများကြီးပိုဏဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်, ဆော်ဒီအာရေဗျများအတွက်ဘောပင်, ကာတာနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အရာကြွင်းလေသမျှ။
ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေတစ်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ပါပြီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအကြား အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှာပါ။ အဓိကတန်ဖိုးများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုန်ထမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိဤဘဏ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ GCC အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှ.
MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူနယူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကုမ္ပဏီဌာနများအတွင်းကြီးထွားလာ။ သင်သည်ထိုသူတို့၏တဦးတည်းနှင့်စော်ဘွားများအတွက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ရှာဖွေနေရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ သင်၏လက်ကိုမြှင့်ခြင်းနှင့် သစ်တစ်ခုလွတ်လျှောက်ထား နှင့်အစ္စလာမ့်ရှရီယာအသစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစွမ်းဆောင်ရည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ သေချာများအတွက်ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် Dubai မှာဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များပေးပါသည်။
သို့သျောလညျးသငျသညျဒါကောင်းစွာပညာတတ်မဟုတ်ပါ။ သင်ဆဲတစ်ဦးရှိ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အခွင့်အလမ်း။ ဒူဘိုင်းအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်အသစ်သောပါရမီပညာရှင်များများအတွက်အစီအစဉ်များတစ်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျတိုင်းလူတစ်ဦးအစဉ်အမြဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးပေးအောင်နှင့်အတူတစ်မိသားစုရှိခြင်း။ ရုံဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များရတဲ့အတှကျသငျ့အိမျအဖွဲ့ဝင်များကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့။ နှင့် ဒီကုမ္ပဏီကိုသင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ တိုင်းအသစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းများကိုဝန်ထမ်းနောက်ထပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
ဒူဘိုင်း၏ Commercial Bank
ဒူဘိုင်းအတွက်မိသားစုဘဏ်, သင်ကောင်းတစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ် CBD မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာကြံနိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျပြီးသားဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ပြောင်းရွှေ့လျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေဒူဘိုင်း၏ Commercial Bank မှာနောက်ဆုံးပေါ်နေရာလွတ်မှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်ဆိုတော့အဘို့ရာအရပ်ကို။ သည်အခြားကြီးမားသောဘဏ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေ, သင်လျော့နည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးပိုပြီးလေ့လာပါ။
CBD 1969 အတွက် operating စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များပေးခွငျးအားဖွငျ့ယခုတိုငျအောငျအောငျမွငျစှာစီမံခန့်ခွဲ။ ထိုအနှောင်းပိုင်း Rashid Bin ကို Saeed Al Maktoum ကထုတ်ပေးထားတဲ့ Amiri အမိန့်အားဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ကုမ္ပဏီအများကြီးစိုက်ပျိုး, ဒါပေမယ့်တက်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ရန်ရှိသည်ထားပါတယ်ကျော် 35th အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အနေအထားကို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွင်းမှာပဲ။ ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ၎င်း၏တိုးချဲ့အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ အဆိုပါ CBD သစ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများဆီသို့ရွေ့လျားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးဘဏ္ဍာရေးနှင့်အစ္စလာမ့်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူလက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖြစ်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောလျှောက်ထားရန်ထိုက်သည် သငျသညျဒေသခံဖြစ်ကြပြီးသင်တစ်ဦးအစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ဒူဘိုင်းတွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါလျှင်.
ဒူဘိုင်းမှာ RAKBANK အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပျအတှကျထိပ်-rated ဒေသခံကုမ္ပဏီ။ နောက်ခံ, သင်က RakBank နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ 2018 အတွက်ပြည်တွင်းစျေးကွက်များကိုဝင်တိုက်ကုမ္ပဏီ ကြော်ငြာနှင့်အတူ။ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်အကောင်းဆုံးကြော်ငြာကြော်ငြာတစ်ခုမှာ။ အဆိုပါ RAKBANK နေ့ကစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့နေ့ကစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အထူးသဖြင့်ဒေသခံဒူဘိုင်းအခက်များအတွင်း။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများအမြင့်မားဆုံးနိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများရရှိဒါကကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှု။
သို့သော်ငြားလည်း, ဒီကုမ္ပဏီအားကြီးသောအင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ထံမှတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့လွယ်ကူသောသဘောတူညီချက်မရှိခဲ့ပါ။ သင်တစ်ဦးဉာဏစိန်ခေါ်မှုရှောက်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နဲ့ ငှားရမ်းမန်နေဂျာတို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရစဉ်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှ။ ဤဘဏ်ဒေသခံများထံမှ 2018 အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေနေသူမှလူတိုင်းအတွက်ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါဘဏ်ကိုလည်း Ras Al-Khaimah အမျိုးသားဘဏ်အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ RakBank နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲချုပ်ရိုး။
RakBank အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေ့တိုင်းသင်စိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်။ စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကနေဦးဆောင်လက်လီဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်း။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးမှတက်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ယူအေအီးအတွက်ဘဏ်သိသိသာသာကြီးထွားလာသည်။ နေ့တိုင်း 720,000 ကျော်အသစ်နှင့်တည်ဆဲဖောက်သည််ထမ်းဆောင်။ Rak-ဘဏ် 1976 အတွက်စစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် သငျသညျမြှင့်တင်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌မြျှောလငျ့နိုငျထက်ပို။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့, RakBank နေဆဲငှားရမ်းနေသောဒူဘိုင်းရဲ့အသက်အကြီးဆုံးဒေသခံဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2018 နှင့် 2019 အတွက်၎င်း၏အမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးမှုနှင့်အများဆုံးပြောင်းလဲနေသောဘဏ်တစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကပင်လျှင်စာရင်းစစ်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့် Ernst လူငယ်စာရင်းစစ်နှင့်အတူခက်ခဲကြိမ်သွား.
ပထမဦးဆုံးအဘူဒါဘီဘဏ်နှင့်အတူဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အထက်တန်းလွှာ။ အဆိုပါ ယူအေအီးနိုင်ငံသားများထက်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ဒေသခံဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အပေါ်ကြီးထွားလာပထမဦးစွာအဘူဒါဘီဘဏ်။ တစ်ဦးယူအေအီးအမျိုးသားရေးအသစ်အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ပေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဤဘဏ်သည်အခြားနှိုင်းယှဉ်အတော်လေးအသစ်ဖြစ်၏ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် 41 နှစ်အတွင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီကုန်သွယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအဘူဒါဘီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ယူအေအီးအမှုဆောင်အရာရှိတစ်ဦးတွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းအလွန်အမင်းယူအေအီးအတွက်ဂုဏ်ယူနေပါတယ်။ လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုအရည်အချင်းနှင့်အသည်းအသန်တစ်ဦးချင်းစီ အမြဲ Fab နှင့်အတူအလုပ်စတင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေ။ သင်တစ်ဦး Open-စိတ်တူကိုယ်တူတစ်ဦးချင်းစီလျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်အတွင်းဘဏ္ဍာရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအာရုံစိုက်ရူပါရုံကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ စဉ်တွင် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ် ယူအေအီး၌ကြီးသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုပို့ဆောင်ရန်။
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားနေချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအတွက်ထားပါ။ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းကူညီပေးနေဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ outfitted ။ သူတို့ကိုအထူးပညာရေးစင်တာများကိုရောက်ရှိကူညီခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အသစ်ဝန်ထမ်း Pass နှင့်လိုအပ်သောသင်တန်းနှင့်ပညာရေးကူညီပေးနေစီမံခန့်ခွဲမှု။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စကဘာလဲဆိုတာ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏ပညာရေးသင်သည်သင်၏စံချိန်စံညွှန်းများပေါ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်.
2004 အတွက်အစ္စလာမ့်စတင်လည်ပတ် Emirates ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, တကအတော်လေးသစ်ကိုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အရယူခြင်း ဒီအဖှဲ့အစညျးနှငျ့လွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သည်။ အဖြစ်ကြောင့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အသစ်သောကုမ္ပဏီများသည်အစာရှောင်ကြီးထွားဖို့ကိုချစ်ကိုသိ။ အထူးသဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအဖွဲ့အစည်းများ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်ထဲမှာအသစ်ကဝန်ထမ်း။ ကျိန်းသေ, သင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းမကယ်မလွှတ်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြီးထွားလာဘဏ်များဖြစ်သောကြောင့် ယူအေအီးအတွက်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သူတဦးတည်း.
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအသစ်တခုစီမံကိန်းကိုစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစ္စလာမ်မစ်ဘဏ်နှင့်အတူကိုကျော်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရစဉ် ကပြောသည်ရပါမည်အရာကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဤဘဏ်ရှရီအဟ်အခြေခံမူများအမြင့်မားဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီအတွင်းအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ထိုမှတပါး, အာရဗီယဉ်ကျေးမှုဒီဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီမှအလွန်အမင်းချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤဘဏ်နှင့်အတူဖွင့်ဖို့ထူးချွန်ဆုံးလမ်းတစ်ခုမှာ။ ကျိန်းသေဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအနေအထားရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားကို၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအား၎င်းတို့၏အသစ်ကမှထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်ဖောက်သည်များရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ ခဏ၌သင်တို့ကိုရာထူးတိုးနှင့်ဆိတ်ကွယ်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရနိုင် တစ်ဦးချင်းအကြံပေးဘဏ္ဍာရေးအနေအထားကနေ။ ပြီးတော့သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းရှင်များအဖြစ်အကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းကူညီပေးနေ။ အဆိုပါအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုဈေးကွက်ကိုကျော်ကြီးထွားရန်။ အစ္စလာမ့်ဘဏ်ညာဘက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဘို့ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့.
ဒူဘိုင်း ADCB အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဂျော့ဘ်
တစ်ခုချင်းစီကိုဝန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကူညီမှုအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချဉ်းကပ်။ ADCB ဘဏ်အလုပ်အတွက်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ADCB ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 မျှော်လင့်။ အဆိုပါဘဏ်ဖြစ်လာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံး။ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲသူတို့အဘူဒါဘီအတွက်အကြွေးနဲ့ controller ၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
ADCB အသက်အရွယ်ကနေပထမဦးဆုံးဖွဲ့စည်း 1985 အခြေချခဲ့သည်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထိုအချိန်မှစ. ဘဏ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ နှင့်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ယူအေအီးအစိုးရများအတွက်စူပါအဖိုးတန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဘဏ်လျောက်ပတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရှေ့ဆက်သည်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုသွား။ ADCB ရဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ နယူး ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ HR ဌာနတစ်ခု CV ကို upload လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဘဏ်တောင်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဘို့များစွာသောအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း။
အဖွဲ့အစည်းကိုဖြတ်ပြီးဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသည်အဘယ်သူကိုမျှအဘို့ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလိုက်စားနှင့်အသစ်ပြည်တွင်းရေးနေရာလွတ်ဖြည့်ဆည်းအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤဘဏ်နှင့်အတူစတင် သငျသညျအလုပျ site ပေါ်တွင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်ခြင်း ကျိန်းသေသငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအသစ်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဖွ။ ADCB နှင့်အလုပ်လုပ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတလွှားကနေဖောက်သည််ထမ်းဆောင်ပါဝငျသညျ။ ကဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ADCB ဘဏ်ထဲကနေနေရာလွတ်သို့ Get
ဥပမာ, အတော်ကြာနေရာလွတ်ပွဲချင်းပြီးပေါ်တွင်သင်ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ သောကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက် ADCB ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အားလုံးစစ်ဆင်ရေး၏အဓိကဒေသများကျော်စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝငျသညျ။ အခြေခံလက်လီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ ထိုအခါသင်သည်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းဌာနပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါကဲ့သို့သောအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့ ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိအကြံပေး။ သင်တို့သည်လည်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးမှာ, သင်ဒူဘိုင်းဌာနများအတွက်နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ADCB ဘဏ် အဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်း, Sharjah နှင့် Al Ain အတွက်မျိုးစုံနေရာများမှာအကိုင်းအခက်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ဒူဘိုင်း Noor ဘဏ်အတွက်အလုပ်အကိုင်
သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်ဘယ်မှာ Next ကိုကုမ္ပဏီ Noor ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က Noor အစ္စလာမ့်ဘဏ်အဖြစ်လူသိများအဆိုပါ။ ပထမဦးဆုံးဌာနခှဲကဒူဘိုင်းအတွက်ဇန်နဝါရီလ 2008 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကတည်းက အောင်မြင်စွာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစိုက်ပျိုး။ အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေခြင်း Noor ဘဏ်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်အလုပ်ရှင်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းသိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ Noor ဘဏ်တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေး အလုပ်အကိုင်ပြည့်စုံအကွာအဝေးယူအေအီးအတွက်ကမ်းလှမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရောင်း။ တည်ဆဲဖောက်သည်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ကူညီပေးခြင်းဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကြီးထွားနှင့်အသစ်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်များများအတွက်အစီရင်ခံစာများ generate ။ အကောင်းဆုံးကိုန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာစည်းစိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ် တစ်ဦးအာမခံအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်။ ထို့အပွငျဘဏ္ဍာတိုက်များနှင့်ကုန်သွယ်အလုပ်အမှုဆောင်အထူးကု။
အဆိုပါ Noor ဘဏ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Noor ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Group ကရာခိုင်နှုန်း 95 ပိုင်ဆိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရာခိုင်နှုန်းဟာ5အမ်းမရိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ပိုင်။ သို့သော်အပြုသဘောဘက်မှာ, တစ်ဦးချင်းစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကပိုင်ဆိုင်သုညအမှတ်တစ်ဦးလည်းရှိသေး၏။ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအဖြစ်ယူအေအီးအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များအဘို့, Noor ဘဏ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးမြင့်မားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိနေခြင်းရှိပါတယ်။
သငျသညျကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့သင့်ပါတယ်ရှိရာလာမည့်ကုမ္ပဏီယူနိုက်တက်အာရပ်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိပ်တန်းအခွက်တဆယ်အမှုဆောင်အရာရှိစုဆောင်းဖို့ရှာကြံ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ကပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်။ သငျသညျစတငျနိုငျ တစ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင် ငွေကြေးရန်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြန်သေချာဘို့, ယူနိုက်တက်အာရပ်ဘဏ်ကိုတိုက်ရိုက်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ သေချာသည် အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများအိမ်တော်၌ကြီးပြင်းလာနေကြ။ ယူနိုက်တက်အာရပ်ဘဏ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအယ်လ် Hilal ဘဏ်အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ
ယူအေအီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဘဏ်တစ်ခုမှာ။ ဒါကကုမ္ပဏီအလွန်အမင်း rated မပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ သငျသညျအလုပ်အကိုင် start ဘယ်မှာသင်၏နောက်ကုမ္ပဏီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တရားဝင်က်ဘ်ဆိုဒ်အကောင့်အယ်လ် Hilal ဘဏ်ငှားရမ်းကြောင်းဟု။ ဘဏ်စနစ်ရိုးရှင်းတဲ့စေသည်မှအစဉ်အမြဲကြိုးစားနေဘဏ်ထဲမှာဌာနခွဲမန်နေဂျာ။ အဆိုပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စူပါစမတ်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်မဟုတ်။ ဒါ့အပြင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခွင့်အလမ်းများကိုအများကြီးရှိခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်နေဆဲဤဘဏ်အလုပ်အကိုင်အရာပူဇော်သက္ကာကို။ ဒါကြောင့်သင်ဆဲအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေတည်းခိုနေစဉ်။ core ကိုအစ္စလာမ့်တန်ဖိုးများစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အယ်လ် Hilal ဘဏ်စတင်ဇွန်လ 19 ၏ 2008th မှစ. လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီတည်ထောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအနှစ်ချုပ်ရန်။ ဒါကကုမ္ပဏီကိုပထမဦးဆုံးဌာနခှဲကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ရှိရာဘူဒါဘီကနေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဒူဘိုင်းအတွက် DBS စင်္ကာပူဘဏ်ထဲမှာတစ်ဦးကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကုမ္ပဏီစင်္ကာပူရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, သင်တို့အဘို့အမှန်တကယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုအပ်ချက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိခြင်း။ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများပါဝင်ပတ်သက်နေ။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များအံ့သြဖွယ်စက်နှိုးခြင်းနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေလိုအပ်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်အတွက်အစာရှောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာလွတ်အများစုဟာ။ တစ်ဦးက DBS ဘဏ်တစ်ခုတည်းသောတောက်ပဝမျးမွောကျခွငျးမဟုတျပါဘူး။ သို့သော်ဘဏ္ဍာရေးအသိပညာဒီကုမ္ပဏီ၏စိတ်နှလုံးသည်။ နှင့်ကျိန်းသေ, ဒီကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်ကဖောက်သည်များနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းသိတယ်။
DBS ကုမ္ပဏီခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အာရှတစ်ဦးဦးဆောင်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဒီကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်း ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အာရှတစ်ဝှမ်းထိပ်တန်းအရည်အချင်းကလူ။ ဒူဘိုင်း၌ဤစင်္ကာပူဘဏ်တကမ္ဘာလုံး 250 စျေးကွက်ဖြတ်ပြီး 17 ကျော်အကိုင်းအခက်ရှိပါတယ်။ ရုံးချုပ်ဟာအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်စင်္ကာပူအဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကို C-Level ဘဏ်မန်နေဂျာလွတ်ဘို့ငှားရမ်းထားခံရဖို့ကြောင်းမလှယျကူဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ရုံစင်္ကာပူမှကိုကျော်ပျံသန်းစေခြင်းငှါအဆိုးဆုံး။ DBS ဘဏ်, ရေရှည်မှာတစ်ဦးရှိပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကြီးထွားလာရှိနေခြင်း.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအများအပြားဆုရရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အလုံခြုံဆုံးကဘဏ်အာရှတွင်အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်။ 2009 ထံမှ 2014 ခြောက်နှစ်ဆက်တိုက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးထံမှထို့ပြင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ လည်းဖြစ် ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာဒေသအတွက်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြု။ ပိုပြီးဆုသတင်းအချက်အလက်ဘို့သင့်ကိုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျရှိရာ၎င်းတို့၏စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့အတော်ကြာကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ Company ၏အစဉ်အမြဲဂုဏ်ယူခဲ့ ပေးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ အထူးသဖြင့်ဘလွန်းဘာ့ဂ်သို့မဟုတ် Ernest လူငယ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အတှေ့အကွုံရှိခြင်းကြသည်သောသူတို့အဘို့။ သင်တစ်ဦးစာမကျြနှာအသကျရှငျရှေ့တော်၌ကိုယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်အခြားကုမ္ပဏီများရှိပါတယ်။ အစဉ်အမြဲဈေးကွက်ထဲမှာအခက်ခဲဆုံးကစားသမားများအတွက်စောင့်ဆိုင်းမရေမတွက်နိုင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ဤကိစ္စတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသင့်ရဲ့စစ်မြေပြင်သည်။
ကျနော်တို့ဘလွန်းဘာ့ဂ်မှာ Careers ဘို့သင့်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိပ်တန်း rated ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကောင်းစွာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူသိများဖြစ်လာသည်။ မြင်နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့, Bloomberg သတင်းဌာနကော်ပိုရေးရှင်းကခဲ့ကြကြောင်းလည်းသတင်းအချက်အလက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ့စဉ်လည်ပတ် ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကျော်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဘဏ္ဍာရေးဖြေရှင်းချက်ပေး။ အထူးသဖြင့်တည်ဆဲ client များအတွက်။ ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဓိကန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ real-time နှင့်သမိုင်းဒေတာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုနေ့တိုင်းအလွန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်ကိုင် စျေးကွက်အတွင်းအမြန်ဆုံးအဖြစ်။ သည်အခြားဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟာဘလွန်းဘာ့ဂ်ပြီးသားရလဒ်တွေကိုသိအရည်အသွေးနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်။ အဆိုပါ HR ဌာနများတွင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကသူတို့အဖွဲ့ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးထွက်တတ်၏။ စုစုပေါင်းဒီကုမ္ပဏီအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတကမ္ဘာလုံးဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်၏အနာဂတ်တီထွင်ခြင်းနှင့် reinventing ။
သင်ဒီမှာအံ့သြဖွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးအခွင့်အလမ်းများကိုသင်လိုအပ်တိုင်းအရင်းအမြစ်ကိုပေးမည် သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာရောက်ရှိပေမယ့်အဲဒါကိုဖြစ်ပျက်စေရန်သင့်အားမှတက်မယ့်ရန်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ EY အတွက်အလုပ်
ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးနေရာလွတ်နှင့် ပတ်သက်. စကားပြော။ ကျနော်တို့အလုပ်အတွက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများ၏စာရင်းကိုဖို့ EY add ရပါမည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာမခံချက်အတွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အခွန်, အရောင်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့နှင့်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့န်ဆောင်မှု။ နိုင်ငံတကာ 167,000 န်ထမ်းထက်ပိုရှိခြင်း Ernst & Young က။ ထိုသူအပေါင်းတို့က core ကိုဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးများကိုမျှဝေနေဖြင့်စည်းလုံးညီညွတ်ကြပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာသစ်ကုမ္ပဏီများအစဉ်အမြဲအသစ်အဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးလာအောင်နှိုးဆွ။ ထိုအ EY ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောလူ အမြဲလက်ျာဘက်အရာလုပ်ပါ။ ဒီကုမ္ပဏီစော်ဘွားအတွက်လူသိများသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသင့်လျော်သောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုများပေးရန်ကတိကဝတ်ကိုတည်ဆောက်စေ။
ကျနော်တို့ရှိသည်သောမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဓိကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်သင်တို့အဘို့ကိုဖုံးလွှမ်း။ သငျသညျဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များဘို့ငှါးပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်။ သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးအတှကျလျှောက်ထားတဲ့အခါ။ သငျသညျကျိန်းသေတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်အနည်းဆုံး အခြို့သောကောင်းသောအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိ။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီ၌အသစ်သောဒေသခံငှားရမ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေအကြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သင်တို့သည်ငါတို့၏ post ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကြီးမားမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်း။ သငျသညျအခြားသူတွေကိုကူညီ Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းခရီးသွားဧည့် နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။